IFama yaseDreamwood: Ukuhlala kwiFama yaseLuxe kwiLonghorn Ranch
Le ndlu yasefama imangalisayo yakhiwa ngexesha lobukoloniyali (emva kwee-1700s) kwaye umsebenzi wezandla uyaphefumla. Ngexesha lobuyiselo ngentwasahlobo ka-2021- izinto eziluncedo kunye nefenitshala zongezwa ngelixa zigcina zonke iimpawu zokuqala. Ipropathi ngokwayo iyifama esebenzayo kunye nekhaya leenkomo ezingama-50 eziLonghorn. Bukela ukuphuma kwelanga ukusuka kwiveranda engaphambili, hamba ngamadlelo ukuya echibini ngasemva, upheke isidlo usebenzisa imifuno ekwipatio yangasemva, okanye uhlale ecaleni komlilo wenkampu ngelixa ujonge iinkwenkwezi.
Lo mhlaba uyamangalisa ngaphakathi nangaphandle, kwaye wonke umlinganiswa wokuqala kulo lonke ugciniwe ngelixa usenza ukuba usebenze kwaye unobunewunewu. Imigangatho yangaphambili yokhuni oluqinileyo yenziwe ngesanti entle kwaye yangcoliswa, ukhetho lwepeyinti lwatshintshwa ukuze luhambelane ngokuchanekileyo nemibala yokuqala kwigumbi ngalinye, iipatiyo zalungiswa ngokutsha kusetyenziswa amatye asele ekhona kwaye igadi ngaphambili yajikwa yaba yiyadi entle kunye nendawo yokuhlala.
Kumgangatho wokuqala uya kufumana ikhitshi entle enekhabhathi yesiko lama-Amish, isiqithi, kwaye yakhiwe ngezixhobo zombane zase-Itali ezibandakanya isitovu, i-oveni, i-microwave, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, umenzi wekofu, (Kuerig / drip combo) nokunye. Uya kufumanisa ukuba ifakwe kakuhle kwi-cookwaware, izinto zokupheka, kunye nokuphaka izitya ukulungiselela ipati yegadi egqibeleleyo. Iziqholo, ityuwa kunye nepepile, kunye neoli zinikezelwa. Ngaphandle kwekhitshi ligumbi lokutyela elinetafile entle yoBuyiselo lweHardware kunye neendawo zokuhlala ezi-6. I-buffet ibonisa izinto ezininzi zeglasi kunye ne-barware ye-cocktail oyithandayo okanye iglasi yewayini. Ngexesha leenyanga zasehlotyeni sicebisa i-mojito eyenziwe nge-mint entsha ukusuka kwi-patio yangasemva!
Ngaphakathi kweholo uya kufumana igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlala elisemthethweni. Igumbi lokuhlala linendawo eninzi yokuhlala kunye neTV eneempawu ze-Smart TV (akukho mabonakude wetshaneli apha, kodwa asicingi ukuba uya kuyikhumbula). Iisofa ezimbini ezintle ze-navy velvet zasePottery Barn yindawo ekugxilwe kuyo kwigumbi lokuhlala elisesikweni elenza indawo entle yokuthomalalisa ngekomityi yekofu kunye nencwadi oyithandayo.
Kumgangatho wesibini kukho amagumbi okulala amathathu- onke aneebhedi ezinkulu. Igumbi lokulala eliphambili (igumbi elibomvu) libonisa ibhedi enelinen emhlophe, igumbi lokuhlambela elimangalisayo le-en-suite, izambatho zakhe kunye neendawo zokufunda. Indawo ekugxilwe kuyo yegumbi lokuhlambela eliphambili zizandla ezantsi kwi-zero yokungena kwishawari enomsebenzi wethayile entle kunye nentloko yemvula kunye nezixhobo zeshawa eziphathwa ngesandla. Kukwakho nejacuzzi kunye nesitya sokuhlambela esiphindwe kabini esinekhabhathi yesiko.
Igumbi eliluhlaza linikwe i-rattan McGee kunye ne-Co. ibhedi enhle kwaye igumbi eliluhlaza libonisa ibhedi ye-Canopy ye-Pottery Barn kunye nesibuko esipheleleyo se-leaner.
Igumbi lokuhlambela lesibini kwabelwana ngalo phakathi kwamagumbi amabini okulala kwaye libandakanya isitya esingento yanto ephindwe kabini- ishawari yibhafu / ishawari.
Ukuba ucinga ukuba ngaphakathi kweli khaya kuvakala / kukhangeleka kumangalisa, linda nje de ubone izithuba zangaphandle. Kukho iipatio ezintathu, ivaranda engaphambili enezitulo ezishukumayo, iyadi ebanzi, emva koko ke amadlelo eLonghorns endulini. Ipatio yangaphambili inikwe ifenitshala yangaphandle kunye nomgodi womlilo weBreeo, kwaye kwipatio yangasemva uya kufumana itafile yokutyela kunye nezityalo ezizaliswe ngamagqabi amatsha kunye nemifuno (ngexesha). Kukho i-propane grill kwindawo. Wamkelekile ukuba uhambe ngeendlela emahlathini okanye emathafeni kwaye ukuba uhamba ngasemva kwipropathi uya kufumana ichibi elihle. (Akukhuselekanga ukuqubha). Nokuba ubukele ukuphuma kwelanga / ukutshona kwelanga okanye ukujonga iinkwenkwezi emlilweni uya kuqiniseka ukuba wenze iinkumbulo ezininzi ezintle kwiindawo ezingaphandle kwipropathi.
Ngenxa yendawo yasemaphandleni isantya esiphezulu se-wifi yi-10mbps. Kukho i-TV ehlakaniphile ukuze ube namandla okusasaza ngeHulu/Netflix/Amazon/etc. Nangona kunjalo asikwazi ukufumana i-cable channel TV kule ndawo.
Indlu yasefama yinxalenye yefama esebenzayo yeehektare ezili-150, ngoko ngelixa kusenokubakho abantu abasebenza eshedini okanye emadlelweni, indlu kunye neyadi ihlala kude ne-driveway kunye nendawo yebhari kwaye inika indawo yabucala eninzi (uya kuba neendawo ezininzi zokupaka ezikhethiweyo. amabala). Yonke into efanekisiweyo kubandakanya iyadi kunye neendawo zepatio zezakho kuphela ngexesha lokuhlala kwakho. Kukho enye indlu encinci ebekwe kwelinye icala lepropathi (uya kuqhuba udlula isiza kwi-driveway) eza ku-Airbnb ngoNovemba ka-2021.
Sisoloko sifumaneka ngomyalezo ngexesha lokuhlala kwakho kwaye entwasahlobo nasehlotyeni kukho umgcini ohlala kwelinye icala lepropathi ukuba ufuna nantoni na.
Nceda uqaphele: Ngokuqinisekileyo akukho maqela okanye imisitho. Iindwendwe ezingahlawuliyo azivumelekanga kwisakhiwo ngaphandle kokuba ubunayo imvume yangaphambili. Akukho ziqhushumbisi okanye umculo ongxolayo phantsi kwayo nayiphi na imeko (oku kuya kuzoyikisa iinkomo nto leyo enokuba yingozi kukhuseleko lwazo kwaye ibangele umonakalo wepropathi).